Nhau - Zvekuita kana paine dambudziko neinjini humburumbira musoro gasket
Zvekuita kana paine dambudziko neinjini humburumbira musoro gasket
Kana iyo humburumbira yemusoro gasket yakakuvara kana isina kusimbiswa zvakanyanya, injini haigone kushanda zvakajairika uye inofanira kutsiviwa nekukasira. Matanho chaiwo anotevera:
1. Bvisa chivharo chevhavha uye gasket.
2. Bvisa vharuvhu rocker ruoko gungano uye tora vharuvhu kusunda tsvimbo.
3. Zvishoma nezvishoma sunungura uye bvisa humburumbira musoro mabhaudhi mumatanho matatu akateedzana kubva kumacheto maviri kusvika pakati, uye bvisa humburumbira musoro negasket.
4. Bvisai zvinhu zvekuboora pamubatanidzwa wechuru chechuru nesirinda.
5. Dzorera rutivi rwakatsetseka kana rwakafara rwesirinda gasket kwakanangana nesirinda. Izvo zvinopesana ndezvechokwadi kukanda simbi humburumbira zvivharo uye aluminium humburumbira misoro.
6. Paunenge uchiisa iyo humburumbira musoro, tanga washandisa mabhaudhi ekumisikidza kumisikidza humburumbira. Mushure mekunge mamwe mabhaudhi emusoro esimbi akasungwa neruoko, bvisa mabhaudhi ekumisikidza uye isa iyo humburumbira musoro mabhaudhi.
7. Shandisa torque wrench kuti usimbise zvishoma nezvishoma kune yakajairwa torque mune 2-3 nguva mune yakasarudzika kurongeka kwekukatanura.
8. Isa vharuvhu yekusunda tsvimbo uye vharuvhu rocker ruoko gungano munzvimbo yepakutanga. Mushure mekutarisa nekugadzirisa kubvumidzwa kwevhavhavha, gadza iyo gasket nevhavha yevhavha.
Yantai Ishikawa Kuisa Sekinoroji Technology Co, Ltd. inonyanya kugadzirwa nekushanda kwemapuratifomu ekuisa chisimbiso, magasketi, uye nhoo dzekupisa. Ndiyo mutevedzeri wasachigaro unit yeChina Friction uye Sealing Materials Association uye sachigaro unit yeMulti-humburumbira Diesel Injini yeKanzuru yeInternal Combustion Engine Association. Iyo ndiyo hombe muChina Imwe yemakambani anoshanda mukugadzirwa kwezvisimbiso zvigadzirwa.
Kuti uwane zvinoenderana nekuvandudzwa kwemaitiro ekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwenyika dzese, iyo yekuzvigadzira isina-asbestosi gasket ndiro uye yakasimbiswa graphite gasket ndiro yakawana nyika yekugadzira patents, uye iyo isiri-asbestos ndiro inozivikanwa neEuropean chiremera chekuyedza agency; kupisa nhoo zvigadzirwa zvakawana maviri ekushandisa modhi patent.